John Kerry oo la kulmay Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Geeska Afrika(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
John Kerry oo la kulmay Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Geeska Afrika(Daawo Sawirada)
John Kerry, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, ayaa Isniintii Magaalada Nairobi kula kulmay Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Wadamada Geeska Afrika.
Kulankan, ayaa waxaa si wayn loogu jeex jeexay xaaladda murugsan ee ka taagan Wadanka Koonfurta Sudan, iyadoona lagu soo hadalqaaday doorashooyinka sanadkan lagu wado inay ka dhacaan Somaliya.
John Kerry oo ka hadlaayay shir jaraa’id, ayaa yiri “Waa in Koonfurta Sudan la geeyaa ciidan dadka difaaca, maaha ciidan meesha iska jooggi doona oo la yiraahdo uun waa nabad ilaalin.”
Iyadoo Madaxweynaha Koonfurta Sudan, Salva Kiir uu si xoogan kaga horyimid la shaqaynta Qaramada Midoobe iyo keenista dalkiisa ee ciidan shisheeye, ayaa waxaa uu John Kerry uu Xukuumadda Juba uu ugu yeeray inay la shaqayso Qaramada Midoobe.
“Dowladda Koonfurta Sudan waa in ay la shaqaysaa Qaramada Midoobe, isla-markaana ay aqbashaa ciidanka afarta kun gaaraaya ee Golaha Ammaanku uu ansaxiyay, si loo geeyo dalkaasi.”
John Kerry, ayaa yiri “Waxaa loo baahan yahay in Wadamada Gobolka ay xal u raadiyaan xaaladda cakiran ee ka jirta Koonfurta Sudan. Wadamada Gobolka waxaa looga fadhiyaa inay geeyaan ciidan dadka difaaca.”
Mareykanka, ayaa u muuqda mid dhabar ka riixaaya in dalkaasi la geeyo ciidan ka socda Wadamada Midowga Afrika, balse Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya, haweeneyda lagu magacaabo Amina Maxamed waxay leedahay waxaa loo baahan yahay in Koonfurta Sudan la geeyo ciidan ka socda Qaramada Midoobe.
Dhanka kale Wasiirada, ayaa isu raacay baahida loo qabo xoojinta Hay’adaha Dowladda Somaliya, ka hor doorashooyinka dad-ban ee billaha September iyo Ocrobar lagu wado inay ka qabsoomaan dalka.
Kerry, ayaa wuxuu ku baaqay in dhaqaalo lagu taageero Xoogaga Amisom ee joogga Somaliya, si loo xoojiyo amniga dalka, ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashada. Wuxuu Amisom ugu baaqay inay xaqiijiso xasiloonida goobihii horey looga saaray Ururka Al Shabaab.
Waxaa kaloo uu ku baaqay in la adkeeyo ammaanka dalalka deriska la ah Somaliya, sida Kenya oo kale, si looga hortaggo weeraro ay ka gaysato Al Shabaab.
Ciidamo Boolis oo la geeyay magaalada Jowhar
Axmed Madoobe iyo Michael Keating oo Kismaayo ku kulmay (SAWIRRO)